I-Guangzhou Berlin Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.
ILand Rover Ac Samandla
Komatsu Ac samandla
IKia Ac Samandla
Mahindra Ac samandla
Mazda Ac samandla
IMercedes Benz Ac Compressor
IMitsubishi Ac Compressor
INissan Ac samandla
Perodua Ac samandla
ISuzuki Ac Samandla
IToyota Ac Samandla
Isiguquli seVolkswagen Ac
Chevrolet Ac samandla
IHyundai Ac Compressor
I-Power Steering Rack
Khipha ku-internet izinga Best Izikhungo
Singakhiqiza i-TM13-TM31 compressor
I-Professional Hydraulic Power Steering Rack Ngentengo Yefektri
Njengomunye wabakhiqizi beRacker steering Rack abangochwepheshe, iBerlin egxile ekukhiqizeni ama-compressor we-air conditioning ne-steering Rack. Umkhiqizo we-rack steering unekhwalithi efanayo yokuhamba komoya. Izinga lokushisa lomkhathi nomswakama ohambisanayo kuye kwenziwa ngendlela efanayo ukuze kugcinwe kufane kahle.
Khipha ku-internet Quality ESP Futhi Electric Car Steering Rack Isitolo esidayisa yonke impahla
Ufuna ukuthola inkampani yezingxenye zemoto enikezela ngerakhi yokuqondisa amandla esezingeni eliphakeme? Bheka le vidiyo futhi wazi imininingwane ethe xaxa nge-ESP And Electric steering rack ngentengo eshibhile yakwa-Guangzhou BERLIN Parts Manufacturing Co., Ltd.
Kulungisiwe & Ukufuduka okuguqukayo
Sikhiqiza i-Fixed & I-compressor yokuguquguquka eguquguqukayo.
& isevisi ye-aftermarket yezingxenye zakho ze-AC
& Izingxenye zokuqondisa
Sino-R oqinile futhi onamava kakhulu
& Ithimba le-D ne-QC eliholwa ngonjiniyela baseJapan abanesipiliyoni seminyaka engaphezu kwama-40
ku-compressor, sinikela ngenkonzo ye-OEM ne-aftermarket. Singakwazi ukuthuthukisa nokukhiqiza ama-compressors kusuka ku-110cc-450cc, angasetshenziselwa imoto yomgibeli, imoto yobunjiniyela neloli lesiqandisi. Uma ungakwazi ukuthola umkhiqizo owudinga kuwebhusayithi yethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi, sizokuhlolela. Uma singenawo umkhiqizo owudingayo, singakuthuthukisela wena ngokuya ngesidingo sakho Singakunikeza umdwebo nesampula ukuze uqinisekise.
Ithimba lonjiniyela baseJapan
nesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-40
Iwaranti yonyaka owodwa
Sinikezela emotweni ye-OE
Imikhiqizo yethu iwine izitifiketi eziningi maqondana nekhwalithi kanye nezinto ezintsha
I-Guangzhou BERLIN Auto Parts Manufacturing Co., Ltd, eyasungulwa ngo-2006, iyinkampani yesimanje egxile ekukhiqizeni ama-air conditioning compressors. Inkampani yethu ithola indawo eZhuliao Industrial Zone Baiyun District Guangzhou City, ehlanganisa indawo engamahektare angama-20 nendawo yesitshalo engaphezu kwamamitha-skwele angama-10,000. Inezinto zokuhamba ezilula ezine-5KM kude neBaiyun International Airport nabasebenzi abangaphezu kwamakhulu amabili kubandakanya ochwepheshe abangaphezu kwama-50. Ngaphezu kwalokho, sino-R ozimele& Ithimba le-D nethimba labathengisi abalindele ukukunikeza insiza enhle kakhulu.
Le nkampani ineqembu labaphathi abasezingeni eliphakeme. Isidlulile isitifiketi se-IATF16949 futhi ngomunye wabakhiqizi abambalwa basekhaya okufanele basebenze ngokugcwele. Ithule izinhlobonhlobo zemishini yokukhiqiza nokuhlola esezingeni eliphakeme ebandakanya imigqa yomhlangano waseJapane onekhompiyutha ngokuphelele, isikhungo semishini, ibhentshi lokuhlola laseTaiwan, imitshina yokuvuza yokuvuza kwe-helium, umshini wokuhlanza we-ultrasonic, umshini wokumisa umshini, ithuluzi lokuxhumanisa nelokulinganisa, imicroscope yensimbi, ithuluzi lokulinganisa lomoya , ukuhlolwa kokudlidliza, umshini wokuhlola usawoti njll. Sinokulawulwa kwekhwalithi okuqinile kwazo zonke izingxenye esizenzile. Sinobuchwepheshe nokuphathwa kokulawulwa kwesampula nokwenziwa kwemephu, ukuthuthukiswa kwesikhunta, ukucubungula okungenalutho, ukuhlolwa kokusebenza.
Sinezinhlobo ezintathu zemikhiqizo eyiCompressor Yangaphakathi Elawulwa Okuguqukayo Eguquguqukayo, Isilawuli Sangaphandle Esilawulwa Ngokuhluka Kwangaphandle kanye neCompressor Yokubekwa Okuhleliwe. Silwela ukuthola ukuvunywa nokwethenjwa kwamakhasimende ethu ngekhwalithi yethu engaguquki, ngentengo yokuncintisana kanye nensizakalo enhle kakhulu. Imikhiqizo yethu ithunyelwa eYurophu, eningizimu nasenyakatho Melika, empumalanga ephakathi naseningizimu-mpumalanga ye-Asia njll.
Ukunamathela enhlosweni "yezisekelo zentuthuko esezingeni, idumela lithembele ekuthembekeni" kanye nenqubo yokuphatha "yokwakha inani lamakhasimende ethu, abasebenzi kanye nabalingani bethu", sizoguqula ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bube yimikhiqizo esezingeni eliphezulu ukusiza umphakathi ifaka isandla ekuthuthukiseni imboni yezimoto yaseChina.
Ikhwalithi ethembekile yokuhlangabezana nokufunwa kwamakhasimende ethu
Imikhiqizo yethu ithunyelwa eYurophu, eningizimu nasenyakatho Melika, empumalanga ephakathi naseningizimu-mpumalanga ye-Asia njll. Sinamakhasimende emhlabeni wonke. I-compressor yethu konke okusha sha, zonke izingxenye zivela kumhlinzeki we-OE onewaranti yonyaka owodwa. Singabahlinzeki be-OE kufektri Yemoto.
Sinokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-14 ‘yokukhiqiza nokwakha i-rack steering. Siphinde sinikeze uphawu lomkhiqizo wezingxenye ezihamba phambili eNyakatho Melika naseRussia.
Sicela ukushiye imininingwane yokuxhumana, sizokunikeza insizakalo ye-One-to-one VIP kungekudala.